IO Inopindirana iri kushanda pane imwe Hitman vhidhiyo mutambo | Linux Vakapindwa muropa
Ivo vanoziva nezve yevhidhiyo mutambo indasitiri Zita raHitman hazvingashamisi kwavari. Iri izita rakakura rinowanikwa kune akasiyana mapuratifomu, kusanganisira GNU / Linux futi. Muchokwadi, haisi nguva yekutanga kuti zita iri riratidzike paLxA blog yedu, sezvo isu tataura nezvazvo muzvinyorwa zvakawanda mushanduro dzakasiyana umo inowanikwa pachikuva chepenguin.
Zvakanaka, ikozvino zita raHitman rinonzwika zvakare mushure mekudzidza izvo IO Inoshanda iri kuvandudza mumwe mutambo wevhidhiyo waHitman wakasimbiswa. Iyo kambani inogona kuisunungura iyo yeLinux, kunyangwe zvaisazove zvakajairwa. Nekudaro, kunyange hazvo pasina vhezheni yeLinux, hazvina basa kunyangwe, nekuti Feral Inopindirana ichatarisira kuendesa kune yedu puratifomu sezvayakaita nevamwe uye nemimwe mimwe mitambo yemavhidhiyo sezvataona ...
Izvo zvave zvichizivikanwa kubva pambiru yakatumirwa pane blog uko yepamutemo Hitman mushambadziri regai mushandisi azive nezve kufambira mberi kwemutambo wevhidhiyo. Mune meseji iwe yaunogona kuverenga kuti ivo vari kuita fambiro mberi huru uye kuti iro boka rekuvandudza rinofara kwazvo nemhedzisiro uye izvo zvitsva maficha akawedzerwa. Nekudaro, iye anovandudza anoomerera kuti isu tichiri kuda kumbomira yakati rebei kuyedza zita iri, kubvira ichaonekwa muna 2018.
Nhau huru dzekuziva kuti IO Inopindirana inoenderera nekugadzira makosi seyazvimiririra mugadziri ... Zvinotaridza kuti iyi haisi yechipiri shanduro yaHitman, asi kuti ivo vari kushanda mutambo wakagadziridzwa zvachose. Kana zvirinani izvo zvinogona kuderedzwa kubva kune iwo mashoma ruzivo aripo panguva ino. Isu tichiri kuda kuziva kana ichizowanikwa yeLinux kana kana Feral ichatarisira izvo, mukuwedzera pakuziva rumwe ruzivo nezve zita racho. Tichava vakangwarira!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » IO Inopindirana iri kushanda pane imwe Hitman vhidhiyo mutambo